Ambatondrazaka : mitondra fampandrosoana ny JOCV | NewsMada
Ambatondrazaka : mitondra fampandrosoana ny JOCV
Mitondra fampandrosoana mivaingana ho an’ny mponina ny fanentanana ataon’ny mpilatsaka an-tsitrapo japoney (JOCV). Voaporofo izany any Ambatondrazaka. Iray amin’ireo JOCV 2 miasa any an-toerana i Uzama Kosuke, nandritra ny herintaona sy efa-bolana izay. « Miompana amin’ny zavatra madinidinika kanefa mitera-bokatsoa misongadina ny fanentanana ataony. Toy ny nanaitra ny hambom-pon’ny olona izany ary tena tadiavin’izy ireo », hoy ny ben’ny Tanànan’Ambatondrazaka, Rakotondrabe Samuel.
Miara-miasa amin’ny tokantrano i Uzama Kosuke ary manofana azy ireo amin’ny fomba fitantanana ny vola ao an-tokantrano. Tanjona lehibe amin’izany ny hanatsarana ny fari-piainana. « Ny mahavariana, misy ny olana tsy sahin’ny renim-pianakaviana lazaina eo amin’izay fitantanam-bola izay, kanefa zarainy amin’i Kosuke, satria tsapany fa mahomby ny fanofanana entin’ity mpilatsaka an-tsitrapo ity », hoy hatrany ny ben’ny Tanàna.
Manampy amin’ny fahaiza-mitantana ny rano i Kosuke
Etsy ankilan’izay, manentana amin’ny fahaiza-mitantana ny rano, manondraka ny tanimbary ihany koa i Kosuke. Miara-miasa amin’ireo fikambanana tantsaha izy amin’izany. Dingana lehibe voalohany vitany ny namelona indray ireo fikambanana ireo sy ny federasiona. Ny fisian’ny rafitra mazava toy izany mantsy no andry voalohan’ny fanatontosana ny asa.
Tafajoro ny tambajotra mitantana ny rano amin’ny ilany havanana sy havia amin’ny renirano ao amin’ny kaominina Ambandrika. Tsy misy ny rano ka niara-nitady vahaolana izy ireo : ny fitarihana ny rano avy any Ankotrana, any avaratra andrefan’ity kaominina ity. Efa vita ny lakan-drano mirefy 3km avy any amin’io toerana io ka misy ny latsakemboka aloan’ny tantsaha misitraka izany rano izany. 16.500 Ar/ha no aloan’ny tantsaha, ao amin’ny ilany havian’ny renirano. An-dalana kosa ny fandinihana io latsakemboka io ho an’ny ao amin’ny ilany havanana.
Ny mbola olana, vitsivitsy ihany aloha, hatreto, ny mandoa ny latsakemboka. « Mandeha tsikelikely ny fanentanana », hoy i Kosuke, manantena ny fiovan’ny toe-tsain’ny tantsaha. Ankoatra ny fanaovana ity lakandrano ity, manadio ny lakandrano efa misy sy mikojakoja ny tohodrano Manamontana, ao Ambandrika, koa izy ireo. Tapaka fa 20.000 Ar/ha ny latsakemboka amin’izany. Marihina fa maharitra roa taona ny iasan’ny JOCV amin’ny toerana iray nametrahana azy.